कोरोनाभाइरस आउटब्रेकले आपूर्ति चेनहरू तोड्दछ! | RayHaber | raillynews
घरटर्कीMarmara क्षेत्र34 इस्तांबुलकोरोनाभाइरस आउटब्रेकले आपूर्ति चेनहरू तोड्दछ!
26 / 03 / 2020 34 इस्तांबुल, रेल, साधारण, राजमार्ग, टायर व्हील प्रणाली, HEADLINE, Marmara क्षेत्र, टर्की
कोरोनाभाइरसको प्रकोपले आपूर्ति चेन तोड्दछ
कोरोनाभाइरसको प्रकोपको साथ, हामीले स्पष्ट रूपमा देख्यौं कि बुल्वशिप (माग बढाइएको एक्ज्याजेसन) प्रभाव आपूर्ति चेनमा कसरी हुन्छ। केही उत्पादनहरू अदृश्य भएका छन्, बजार सल्फहरू खाली छन् र तिनीहरूको मूल्यहरू दोब्बर भएको छ। उत्पादन आपूर्ति कारखानाहरू भाग आपूर्तिको समस्याका कारण रोकिए। राज्यहरूले उत्पादकहरूलाई जोगाउन थप उपायहरू उठाए। अर्कोतर्फ, ई-वाणिज्यमा विस्फोट भएको छ। टेक-आउट सेवाहरू अविश्वसनीय रूपमा वृद्धि भएको छ।
शारीरिक दूरी महत्त्वपूर्ण भएको छ। अस्थायी स्वास्थ्य आपूर्ति चेनहरू द्रुत रूपमा स्थापित गर्नुपर्‍यो। TIR ट्रान्जिटहरू सिमानामा रोकियो र TIR पुच्छहरू गठन गरियो। सवारी चालकहरूले १ 14-दिनको क्वारंटाईन अवधि लागू गर्न सुरु गरे। आरओ-आरओ यातायातमा, ड्राइभरहरूलाई हवाईजहाजबाट ढुवानी गर्न सकिदैन र उनीहरूको युरोपियन युनियनमा छोटो भयो। पहिले नै अवस्थित ड्राइभर अभाव दुबै गरीएको छ। सडक यातायातमा अवरोधका कारण फ्रेट समुद्री र रेल यातायातमा सरेको छ। मागमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको थियो। आयात कन्टेनरहरू समुद्रीतटमा समयमै खाली गर्न सकिदैन भन्ने तथ्यले गर्दा, जब निर्यात पोर्टमा खाली कन्टेनरहरूको आवश्यकता बढ्यो, सफा गर्ने इन्धनको अवस्थासँगै मूल्य वृद्धि भयो। अत्यावश्यक आदेशहरू हवाई यातायातका लागि दर्ता गरिएका थिए। यद्यपि, यात्री विमानहरूको उडान रद्द गर्ने परिणाम स्वरूप लोड क्षमतामा आमूल गिरावट आयो र रिजर्भेसन हप्ताहरू पछि सुरू गर्न थालियो। रेलवे सीमा क्रसिंगमा वैगन कीटाणुशोधन सञ्चालनको परिणाम स्वरूप अभियानको समय बढेको छ। नतिजा स्वरूप, के आपूर्ति श्रृंखला भ broken्ग भएको छ? हो। आपूर्ति श्रृंखलाहरूमा बुलविप प्रभाव केवल आपूर्ति चेनहरू सिंक्रोनाइज गरेर रोक्न सकिन्छ। द्रुत र सटीक जानकारी प्रवाह सबैभन्दा आधारभूत मुद्दा हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छन्: "परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण"। आपूर्ति श्रृंखला पार्टीहरूले सूचनाको द्रुत बहाव र व्यवसायको सामान्यीकरणका लागि सँगै कार्य गर्न अगाडि योजना गर्नुपर्दछ। एकल केन्द्र समाधान पर्याप्त छैन।
प्रक्रियामा हामी छौं र हामीलाई रसदको महत्त्व फेरि देखायो। हामीले देख्यौं कि किन रौजिष्टिक कार्यहरू स्वास्थ्यको लागि आपूर्ति चेनको दिगोपनको लागि र पोषण, स्वास्थ्यजन्य, इत्यादि व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न दुबै दिगो सेवाहरू प्रदान गर्न महत्वपूर्ण छ। कर्फ्यूको साथसाथै बाहिर निस्कन नसक्नेहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्नुपर्दछ।
आपूर्ति श्रृंखला लागत खरीद, उत्पादन र रसद लागतहरूको योग हो। भर्खरका घटनाहरूबाट हाम्रो निष्कर्षले देखाउँदछ कि हामीले अझ बढी प्रतिरोधी आपूर्ति श्रृंखलाहरू स्थापना गर्नुपर्दछ र प्रकोप र प्रकोप पछिको उपायहरूको बीचमा भिन्नता राख्नुपर्दछ। हामीले महामारी अवधिमा सम्पर्कविहीन विदेश व्यापार विधिहरू फेला पार्न आवश्यक छ। यस अवस्थामा, रेलमार्फत वैदेशिक व्यापार बढाउने पूर्वाधार लगानीहरू महत्त्वपूर्ण बन्छन्। यो स्पष्ट छ कि सीमामा ड्राइभर परिवर्तन, कन्टेनर परिवर्तन (पूर्ण-पूर्ण, पूर्ण खाली), अर्ध-ट्रेलर परिवर्तन र छिटो कीटाणुशोधन विधिहरू अझ विकसित गर्न आवश्यक छ। यसको लागि बफर जोनहरू सिर्जना गर्नुपर्दछ। वैकल्पिक मार्ग र सीमा गेटहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ र द्रुत कमिसन समाधानहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। बिभिन्न देशहरूको बिभिन्न मार्गहरूमा फरक शुल्कहरू छन्। यी देशहरूसँग अस्थायी सम्झौताको माध्यमबाट उपयुक्त मार्गहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ।
सीमा प्रवेशद्वारमा गाडी चालकहरूमा लागू हुने १--दिनको क्वारेन्टाइन अवधिलाई जतिसक्दो चाँडो आवेदनबाट हटाउनुपर्नेछ र टर्की र विदेशी सवारी चालकहरूको प्रवेश / निकास सीमामा परीक्षण किटहरूको साथ अनुमति हुनुपर्दछ। EU देशहरूमा सवारी साधन चालकको अवधि को बारे मा वृद्धि गर्नु पर्छ। ड्राइभर भिसा आवेदनहरू प्राथमिकताको रूपमा मूल्या should्कन गर्नुपर्दछ र नयाँ भिसा अवधि बढाउँदै लैजानुपर्दछ। सम्बन्धित संस्थाको समन्वयको साथ, यसले सहिष्णुताहरू प्रकाशित गर्नुपर्दछ जुन काम र आराम अवधिको समयमा लागू हुनेछ, जसले सुरक्षालाई नकरात्मक रूपमा असर गर्दैन, र एक समय विस्तार आवश्यकता अनुसार गरिनु पर्छ। समुद्री निर्यात कन्टेनरहरूको व्यापार प्रक्रिया सरल बनाउनका लागि, तौल गरिएको ग्रोस वेट (VGM) को आवेदन अवरूद्ध गर्नुपर्दछ, र जहाज एजेन्सीहरूले पठाउने कम्पनीहरूबाट प्रतिबद्धता पत्र अनुरोध गर्नुपर्नेछ। ड्राइभर / लोड प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्दछ र ड्राइभर र कम्पनीहरूको ट्यागोग्राफ आपूर्ति सरल र द्रुत गरिनु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय यातायात (प्रशिक्षण, परीक्षा, प्रमाणीकरण) मा काम गर्न नयाँ चालकहरूको लागि योजना बनाईनु पर्छ, र केहि एसआरसी र एडीआर प्रशिक्षण र परीक्षाको इन्टरनेट उपलब्धता मूल्या of्कन गरिनु पर्छ।
सिभिल कर्मचारीहरुमा सिफ्ट काम ब्यापार प्रक्रियाहरु लाई लामो। यसको सट्टा, कागजीविहीन प्रशोधन प्रक्रियाहरूको दक्ष उपयोगको उपयोग गरेर प्रक्रियालाई तिव्र तुल्याउनुपर्दछ र प्रत्येक चरणमा रोजगारी गुमाउन रोक्न उपायहरू गरिनुपर्दछ। घोषणा गरिएको प्याकेजमा त्यहाँ कुनै खास समर्थन छैन, जुन प्रकोपबाट अत्यधिक प्रभावित छ, भ्याट घोषणा भुक्तान6महिनाको लागि ढिलाइ बाहेक। यो समर्थन १ 16 सेक्टरहरूलाई दिइइसकिएको छ। यस अवधिमा, ईन्धनमा SCT, जो रसदको लागि महत्त्वपूर्ण लागत वस्तु हो, हटाउनुपर्दछ र सेवालाई अझ अनुकूल परिस्थितिमा प्रदान गरिनु पर्दछ।
एक मध्यम अवधिको चरणको रूपमा, हाम्रा मुख्य यातायात कोरीडोरहरू जो हाम्रो देशलाई समेटेका छन् र यी कोरिडोरहरूमा स्थापना हुने रसद केन्द्रहरू / गाउँहरू जडान गर्दै छन्, वस्तुहरूको प्रवाह सुरक्षित गर्न र जोखिम कम गर्नका लागि दृढ निर्धारण गरिनु पर्छ।
ग्लोबल आपूर्ति चेनको दायरा भित्र हाम्रो देश मा धेरै कम्पनीहरु छन्। पश्चिमका देशहरू आफ्नै देशमा केही उत्पादनहरू उत्पादन गर्न चाहँदैनन्। टर्की निर्यात-उन्मुख विकास मोडेल संग बढ्दै छ। जे होस्, हामीले कच्चा मालमा निर्भर छौं भन्ने तथ्यलाई पनि विचार गर्नुपर्दछ। त्यसकारण हामीले यी कच्चा पदार्थहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले सामना गरिरहेका समस्याहरूलाई परिभाषित गर्नुपर्दछ र समाधान विन्दुहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। केही उत्पादनहरु टर्की मा उत्पादन छैन। तसर्थ, हामी सबै समय ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला मा हुनु पर्छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सबै जोखिमहरू गणना गर्नु र आवश्यक कदमहरू चाल्नु हो। हामीले जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीगत र निरन्तर सक्रिय रूपमा आपूर्ति श्रृंखला र रसदको सर्तमा प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ र छोटो अवधिमा हाम्रो संकट व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु पर्छ। त्यसैले हामीले आर्थिक रूपमा एकल केन्द्र आपूर्ति मोडलबाट मल्टि सेन्टर आपूर्ति मोडेलमा स्विच गर्ने तरिकाहरू खोज्नु पर्छ। हामीले हाम्रो देशमा सामरिक उत्पादनहरू उत्पादन गर्नुपर्दछ।
नतिजाको रूपमा, आपूर्ति श्रृंखलामा अत्यधिक विकल्पहरू र चपलताको महत्त्व फेरि देखा पर्‍यो। यो बुझिन्छ कि विकल्पहरू दुबै रसद प्रक्रिया र उत्पादनमा पहिले नै निर्धारित गरिनुपर्दछ, र घटनाक्रम गतिशील रूपमा अनुगमित गरिनु पर्दछ र सबै भन्दा उपयुक्त अवस्था सर्तहरूको आधारमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
प्रोफेसर डा मेहमेट TANYAŞ
रसद संघ (LODER) को अध्यक्ष
कोरोनाभाइरसको डर बृसा ट्राफिक बढ्यो!
इस्तानबुल-अंकारा उच्च-गति रेल परियोजना गेभ-सपन्का डिजाइन र निर्माण ...
3.National Logistics and Supply Chain Congress started Trabzon मा
पाँच वर्षको लागि रूसी रेलमा रेल को आपूर्ति गर्न Evraz
हार्बिन-डालियान उच्च गति रेलको लागि इन्स्टिलको भारी रेल आपूर्ति
तिब्बतले LKAB को लोहे अयस्क वेगन को लागि इस्पात को आपूर्ति गर्दछ
सिमेन्स दोहा, कतारमा मेट्रो लाइन्सका बिजुलीहरू आपूर्ति गर्छन्।
चेक लोकोमोटिव निर्माता CZ लोको २० बेलारुस रेलवेका लागि डीजल लोकोमोटिभ…
रेलवे सीमा क्रसिंग